အမေဇုံသစ်တောအတွင်းရှိငှက်များ Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ornithologists နှင့်သဘာဝတရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူများ၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်အရောင်များကိုလေ့လာရန်တောင်အမေရိကသို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။ အမေဇုံသစ်တောထဲမှာငှက်မျိုးစိတ်များစွာ.
၎င်းသည်အခမဲ့လေ့ကျင့်မှုမဟုတ်ပါ။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကဆွစ် - အမေရိကန် ornithologist ဖြစ်သည် Schauensee ၏ Rodolphe Meyer "တောင်အမေရိကငှက်များအတွက်လမ်းညွှန်" သူ၏အလုပ်အတွက်စိတ်ချပါ (တောင်အမေရိကငှက်များအတွက်လမ်းညွှန်အမေဇုံ၌ရှိသကဲ့သို့ငှက်အများအပြားမျိုးစိတ်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမဒေသရှိကွောငျးကို။
ဒါတောင်မှကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ငှက်တွေအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုရတာဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေသတစ်ခုလုံး (ဘရာဇီး၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပီရူးနှင့်အခြားပြည်နယ်များပါ ၀ င်သည်)၊ စုစုပေါင်းကိန်းဂဏန်းမျိုးစိတ် ၁၃၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ယင်းတို့အနက်တစ်ဝက်ခန့်မှာဖြစ်လိမ့်မည် ကပ်ရောဂါ.
2 Hummingbirds နှင့်သေးငယ်တဲ့ငှက်များ
3 Gallinaceae နှင့် mallards
4 ကြက်တူရွေးနှင့် Macaws
5 Scavenger ငှက်များ
အမေဇုံဒေသသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထူးခြားသောခွေးမျိုးစိတ်များနေထိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးလူသိများသည် Harpy လင်းယုန် (Harpia harpyja ဖြစ်သည်), လက်ရှိသုဉ်းနှင့်အတူခြိမ်းခြောက်သော။ သို့သော်လည်း၊ ကိုလံဘီယာ၊ အီကွေဒေါ၊ ဂိုင်ယာနာ၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ပီရူး၊ ဆူရာနမ်၊ ပြင်သစ်ဂိုင်ယာနာ၊
တောင်ပံနှစ်မီတာနီးပါးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိရွှေလင်းတများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူနှင့်အနက်ရောင်အမွေးအတောင်သည်အတူတူ၎င်း၏ထူးခြားသောမောက်နှင့်အဓိကကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
ဤဒေသရှိအခြားသားကောင်ငှက်များဖြစ်သည် cryptic Hawk (Micrastur mintori) လှိုင်း ဇီးကွက် (Pulstrix perspicillata).
အမေဇုံသစ်တောတွင်အများဆုံးသောအုပ်စုမှာသီဆိုဖျော်ဖြေသည်ဖြစ်စေမသေးသည်မှာသေချာသည်။ ယင်းတို့အနက်မျိုးစိတ်မျိုးစိတ်အချို့ရှိသည် Hummingbird topaz (ဥဿဖရား pella၎င်း၏အမြီးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းခတ်နှင့်အတူ) ။ ဤလှပသောငှက်သည်တောက်ပသောအမွေးအတောင်ရှိပြီးပန်းပွင့်မှဝတ်မှုန်ကိုစုပ်ရန်၎င်း၏နှုတ်သီးဖြင့်နှုတ်သီးကိုအသုံးပြုသည်။ ဒေသတွင်း၌ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေထားသည်။
အမေဇုံတွင်ကြီးမားသည့်ကက်တလောက်၊ အကောင်းဆုံးလူသိများသူတစ် ဦး ကိုကိုးကားရန်, ငါတို့ဖော်ပြလိမ့်မည် အနီရောင် nuthatch (Dendrocolaptes picummus), woodpecker တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာသော။ အလတ်စားငှက်တစ်ကောင်အတွက်အထူးဖော်ပြခြင်း၊ anရာဝတီ (Ramphastos ထိမိခဲ့တယ်), ၎င်း၏ကြီးမားသောနှုတ်သီးအားဖြင့်အလွန်မှတ်မိ။
Gallinaceae နှင့် mallards
အမေဇုန်သစ်တောတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေမည့်အခြားငှက်များစွာရှိသည်။ Gallinaceae မိသားစု၏မျိုးစိတ်များသည်ခိုင်ခံ့သောခြေထောက်များ၊ နှုတ်သီးတိုများရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပျံသန်းနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း (သို့) အနိမ့်အမြင့်တွင်ပျံသန်းနိုင်ခြင်းတို့သာရှိသည်။
ဒီအမျိုးအစားထဲမှာထွက်ရပ် ဆောင်ပုဒ် (Anhima cornuta), ၎င်း၏နှုတ်သီးအထက်ထွက်လာတဲ့သေးငယ်တဲ့ပြန်တယ်အားဖြင့်အလွယ်တကူမှတ်မိတဲ့ကြက်ဆင်ကဲ့သို့ငှက်။
အမေဇုံမြစ်ကဲ့သို့သောမြစ်များ၊ ချောင်းများနှင့်ရေကန်များရှိသည့်ဒေသတစ်ခုတွင်ငှက်၏မိသားစုမှငှက်များကိုရှာဖွေရန်ယုတ္တိရှိသည်။ duckဆိုလိုသည်မှာဘဲ၊ The ငန်း Orinoco သို့မဟုတ် wigeon ဘဲ ၎င်းတို့သည်အလွန်ပုံမှန်မျိုးစိတ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမေ့ခြင်းမရှိဘဲ Huanganaအလွန်ရောင်စုံအမွေးအတောင်နှင့်အတူရိုင်းဘဲ။
ဤသို့သောငှက်မျိုးသည်အမေဇုန်သတ္တဝါများကိုစဉ်းစားသောအခါပထမဆုံးစိတ်ထဲပေါ်လာသည်မှာသေချာသည်။ အရွယ်အစားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးရှိသော macaws မျိုးစိတ်များစွာရှိသည်။ The hyacinth macaw (Anodorhynchus Hyacinthinus ဖြစ်သည်), အပြာရောင် macaw အဖြစ်လူသိများ, ဖြစ်ကောင်းလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်မေးစေ့တွင်ရွှေအမွေးများပါရှိသည်၊ အများအားဖြင့်အပြာရောင်အမွေးအတောင်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်အလွန်အမင်းမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိနေသောမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အလွန်အံ့ species ဖွယ်မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ် အစိမ်းရောင်တောင်ပံ macaw (ara chloroptera), အမေဇုံဒေသ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသတ္တဝါများသည်နှစ်ပေါင်း ၆၀ နှင့်အထက်အသက်ရှင်နိုင်သောကြောင့်သူတို့၏နှာခေါင်းခွန်အား၊ ဉာဏ်ရည်နှင့်အသက်ရှည်မှုတို့ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။
အခြားအသေကောင်များ၏အကြွင်းအကျန်များကိုကျွေးမွေးသည့်ငှက်မျိုးစိတ်များ။ ဤငှက်မျိုးကိုအမေဇုန်မိုးသစ်တောတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ သူတို့တွင်အခြားအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ရှငျဘုရငျကိုလင်းတ (Sarcoramphus Papa) ။ ၎င်း၏မျက်နှာကိုပျက်စီးစေသောအရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ယဉ်တတ်သောတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏အင်ဒီးဆွေမျိုးနှင့်တူကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရမည် ကွန်ဒို၎င်းတွင်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်လေထုရှိသည်။ အမေဇုံ၏ofရိယာပေါ် မူတည်၍ ဤငှက်သည်နာမည်အမျိုးမျိုးကိုရရှိသည် တောတွင်းကွန်ဒို o ရှငျဘုရငျ zamuro.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » အမေဇုံမိုးသစ်တောရှိငှက်များ